Ingabe bakhathazekile ukuvuvukala amehlo? Izimbangela zesifo ingase ibe khona ehlukile. I obujwayelekile ukubonakaliswa yisiphi isifo. Lokhu kungaba futhi ukwehluleka hepatic, futhi ukungalingani umzimba nezinqubo ukuvuvukala, kanye adenoids yanda, nezinye izifo. Ukuze ukusungula izimbangela ezinikeza ukuvuvukala iso wengane, kubalulekile ukuba kudokotela.
Edema angeke elihlobene ne izifo. Kungenzeka ngenxa yokusabela iguliswa noma iyiphi ukudla noma imiphumela imvelo. Uma ingane yakho ine amehlo zingavuvukalanga, izizathu angase ukufihla ngisho ikhala, okubangela ububomvu nokuvuvukala.
ukuthambekela Ukubambezeleka - kuphinde kube yimbangela kungenzeka ngoba ukubonakala puffiness. Uma abazali zithambekele ukuvuvukala ngaphansi kwamehlo, ingane ingase ifa le zokugula kuzo.
Lapho ingane enamehlo avuvukele izimbangela kungaba ngenxa yokukhathala. Isikhathi eside ukuchayeka ngaleso computer, ukudlala emkhanyweni ophansi, eside ukubukela opopayi noma ama-movie, omagazini noma izincwadi ukufunda - konke lokhu kuthinta ukukhathala amehlo ezinganeni. nokugcinwa Fluid nazo zingase zibangele ukuvuvukala njengoba iso, kanye nezinye izitho ingane.
Ukulala iziyaluyalu abe Amathuba okuvela edema, njengoba umbuso, kanye nokudla, it has a Kumqoka kakhulu ukuthuthukiswa egcwele umzimba wengane.
Uma ingane zingavuvukalanga amehlo, izizathu kumele usungule uchwepheshe ofanelekayo. Ukuvuvukala kungathinta conjunctivitis elula, noma ukuvuvukala kungase kubonise ukuqala isifo sisibi kakhulu. Kunoma ikuphi, uphethwe abeke udokotela.
Lapho amehlo evuvukele ingane (izizathu kakade afakwe futhi ngabelwa ukwelashwa), zama ukugcina ingane ngokuvamile futhi eside emgwaqeni. Ukuze impilo yezingane Kungcono ukuchitha isikhathi khulula ehlathini, epaki - lapho emoyeni lingaphansi bangcolile. Qaphela umbuso - kid has ukuyolala ngesikhathi. Nciphisa isikhathi ubukele ithelevishini futhi uhlale umntwana qapha ikhompyutha. Ukudla kufanele kancane anosawoti insufficiently, ngoba isamba ngokweqile usawoti ekudleni kubambezela umzimba womuntu uketshezi olunqwabelene, okubangela ukuvuvukala endaweni iso.
Lapho iso puffiness ovunyelwe ukusebenzisa ukwelashwa ethandwa ezingasiza ukunciphisa ukuvuvukala ngisho ayibulale.
Susa puffiness zingenzeka umhluzi, okuyinto yakhiwa chamomile, ngokulandelana, futhi bay leaf. Lezi zingxenye angathengwa at Pharmacy. Kokunye enkomishini yamanzi abilayo uthele phezu ingcosana encane isithako ngamunye. Khona-ke kufanele bagcizelele umhluzi amahora amabili. Isikali - wezipuni amabili ngosuku kuze kokudamba ukuvuvukala.
Enye indlela ukususa ukuvuvukala ngaphansi kwamehlo. Kuzothatha 1 isipuni chamomile izimbali kanye isipuni omnyama noma oluhlaza itiye. Konke lokhu mix steamed enkomishini yamanzi abilayo. Ekupheleni 15-20 imizuzu swab bacwilisa ku umhluzi, ukunamathisela Isivalo. Lokhu kuzosiza ekudambiseni ukuvuvukala nokuvuvukala ezizungeze amehlo. Chamomile ungayithola enye amacembe Mint noma umbala lime.
Toxoplasmosis e Cats - Ukuxilongwa, Ukwelashwa
Ukuphelelwa amanzi emzimbeni - ukuntuleka kwamanzi emzimbeni
Paraplegia - Iyini?
EURO 2008: Imiphumela
Uyini izidakamizwa "Dysport"? Imiphumela engemihle kanye nezinye izici
Tattoo ngaphakathi yengalo: imibhalo nge translation, amatshwayo, ukubaluleka
Zingaki izinsuku kusukela ekuhlaleni kwesisu aze azalwe? Indlela ukunquma usuku lokuzalwa?